Maxkamadda ciidamada Qalabka Sida oo billowday dhageysiga dacwada dilkii Dhagajuun
Saturday April 24, 2021 - 11:03:31 in Wararka by Editor in Chief
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta oo ay ku beegan tahay 24 bishaan April ee 2021-ka u fariisatay dhageysiga dacwadda dilkii loo geystay Allaha u naxariistee guddoomiyihii maamulka degmada Hodan Marxuum Cabdixakiin Dhagajuun.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta oo ay ku beegan tahay 24 bishaan April ee 2021-ka u fariisatay dhageysiga dacwadda dilkii loo geystay Allaha u naxariistee guddoomiyihii maamulka degmada Hodan Marxuum Cabdixakiin Dhagajuun. Fadhiga maxkamadda ayaa waxaa goobjoog ah saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada, rag loo heysto dilka marxuumka, ehellada labada dhinac iyo dadweyne kale.
Maxkamadda ayaa waxaa la horgeeyey cadeymo la xiriira sida uu u dhacay dilka guddoomiyihii degmada Hodan oo ay toogteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda.
Sidoo kale maxkamadda ciidamada ayaa la filayaa inay go’aan kasoo saarto kiiskan oo horey guddi gaar ah loogu xil-saaray, kaas oo baaritaan dheeraad ah kusoo sameeyey dhacdadaasi, wuxuuna guddigu shaaciyey in si bareer ah loo toogtay marxuumka.
Allaha u naxariistee Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise (Dhagajuun) oo ahaa nin dhalinyaro ah ayaa xilli habeen ah 21-kii Janaayo ee sanadkan lagu dilay isgoyska Howl-wadaag ee Muqdisho, saacado kadib markii uu kasoo laabtay wadanka Turkiga.